I-China Floor Shop Crane Umkhiqizi Nomphakeli | I-Daxin
I-crane shop yaphansi ilungele ukuphatha impahla kanye nezitolo ezahlukahlukene zokulungisa izimoto. Isibonelo, ungayisebenzisa ukuphakamisa injini. Ama-cranes ethu alula futhi asebenziseka kalula, futhi angahamba ngokukhululeka ezindaweni eziminyene zokusebenza. Ibhethri eliqinile lingasekela umsebenzi wosuku.
Max Ukuphakamisa Ukuphakama: 2220mm * 3350mm
Amandla Ibanga: 650-1000kg
UMax Crane Nweba Ibanga: 813mm-1200mm
Ukuhanjiswa kwamahhala kolwandle kwe-LCL kuyatholakala kwamanye amachweba
Izici Nokuqapha Kokuphepha
Ama-Floor Shop Cranes angasetshenziswa ezimbonini eziningi. Umshini we-crane unomthamo omkhulu wokuthwala umthwalo futhi ulula ukusebenza. IMini Crane ingaphakamisa izinto ezisindayo kalula futhi ikhulule izandla zomqhubi. Iselula Battery Crane ifakwe ibhethri elinamandla, futhi ungayithatha iyosebenza ezindaweni ezahlukene. Uma kuqhathaniswa ne-Electric hoist, i-crane iguquguquka kalula lapho isebenza endlini. Ngaphezu kwalo mkhiqizo, futhi sinezinto eziningi imikhiqizo esetshenziselwa ukukhiqiza kanye nempilo, okungenza umsebenzi wethu ube lula futhi usebenze kahle. Uma udinga umkhiqizo omuhle kangaka, sicela usithumele uphenyo ngemininingwane ethile, futhi sikulindele.
Q: Uyini umthamo ophakeme wokuthwala walezi zitezi ze-Floor Shop?
A: Lapho i-crane isebenza nge-boom eyodwa kuphela, i-hydraulic crane ingathwala isisindo setoni elilodwa. Uma unezidingo ezikhethekile, ungaxhumana nathi ukwenza ngezifiso kuwe.
Q: Ingabe i-boom enkulu inomsebenzi wokujikeleza?
A: Impela, i-boom main ejikelezayo ingenziwa ngezifiso ukuze uthuthukise ukusebenza kahle komsebenzi.
Q: Yiluphi ulwazi okufanele ngikutshele lona lapho ngifuna ukuthola imali ekhokhwayo?
A: Ukuze ngikunikeze ngezinsizakalo ezingcono futhi ezinembe kakhudlwana, udinga ukunginikeza ukuphakama okuphezulu, amandla, nobubanzi bokuzungezisa ingalo obudingayo.
Q: Singasebenza isikhathi esingakanani i-crane shop yaphansi?
A: Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusebenza, i-crane ephathekayo ingasebenza usuku lonke noma ngaphezulu.
Elinye lamakhasimende ethu elivela esitolo sokulungisa izimoto saseMelika lathenga i-Floor Shop Crane yethu ukuthi lithwale ezinye izingxenye ezisindayo zezimoto e-workshop.
Engxoxweni noJerry, usitshele ukuthi kuhle ukuyisebenzisa. Akazisebenzisi izandla ukuphatha izesekeli ezisindayo, wonga umzamo omkhulu, futhi ngoba ikhwalithi yethu yinhle kakhulu, uthathe isinqumo sokuqhubeka nokuthenga omunye wethu iFloor Plate 2 Post Car Lift isetshenziselwa ukulungisa kangcono phansi imoto. Ngicabanga ukuthi uJerry uzoqhubeka nokusebenzisana nathi, futhi angahle abe ngabangane abahle nathi.
Omunye wamakhasimende ethu ase-Australia wathenga i-crane shop yaphansi yokuphatha izinto ezibonakalayo efektri. Ngoba imikhiqizo yethu inekhwalithi enhle kakhulu, ibonwe nguTom nabasebenzi bakhe. Ngemuva kwezingxoxo eziningana, banqume ukuthenga ama-cranes amaningi futhi bafake izicelo zezitifiketi ezithile zokuba ngumthengisi wethu e-Australia. Ngiyabonga kakhulu uTom ngokuthembela kwakhe emikhiqizweni yethu. Nakanjani sizohlinzeka ngezinsizakalo ezingcono kanye nokuxhaswa kwezitolo.
Max Ukuphakamisa Ukuphakama
Kuhoxisiwe / Kunwetshiwe
UMax Ubude crane enwetshiwe
Imilenze yobude obukhulu inwetshiwe
Langaphambilini I-Scissor Ehambayo Imoto Phakamisa
Olandelayo: Umshini Glass ophakamisa
Ama-cranes wesitolo anika amandla ngokugcwele (amandla wokuphakamisa amandla namandla we-out / boom) wokuhambisa imithwalo ngokushesha, kalula, futhi ngokuphepha.
I-2.24V DC idrayivu futhi iphakamisa izimoto ezibamba imisebenzi esindayo.
Isibambo se-ergonomic sifaka ukusebenza okulula okusebenzayo ngokushintsha okungapheli kokuhamba phambili nokuhlehlisa isivinini, izilawuli zokuphakamisa / eziphansi, umsebenzi wokuphindisela ukuphepha ophakamisa ukuphepha ophathelene nokuphepha, nophondo.
3.Kufaka i-disc ye-electromagnetic disc brake ene-othomathikhi yomuntu ofile esebenza lapho umsebenzisi ekhipha isibambo.
I-4.Power shop shop inamabhethri amabili we-12V, 80 - 95 / Ah lead acid cycle, ishaja yebhethri ebalulekile, negeji yebhethri.
5.Poly-on-steel amasondo nokulayisha amasondo.
Ukusebenza kwehora elingu-6.3-4 ngokugcwele - amahora angu-8 lapho kusetshenziswa ngezikhathi ezithile. Kufaka ingwegwe eqinile ne-latch yokuphepha
1. Ama-valve okuqinisekisa ukuqhuma: vikela ipayipi le-hydraulic, ukuqhuma kwepayipi lokulwa nokubacindezela.
2.I-valve ye-Spillover: Ingavimbela umfutho ophakeme lapho umshini unyuka. Lungisa ukucindezela.
3. I-valve yokwehla okuphuthumayo: ingaya phansi uma uhlangabezana nesimo esiphuthumayo noma ugesi.
Intengo ye-Floor Crane
Intengo ye-Floor Shop Crane
Intengo yeGarage Crane
Intengo encane ye-Crane